यी नै हुन् स्कुटर दु’र्घ८टना मा परी मृ८त्यू भएकी अनमी गंगा ! – News543Online
यी नै हुन् स्कुटर दु’र्घ८टना मा परी मृ८त्यू भएकी अनमी गंगा !
March 21, 2021 March 21, 2021 adminLeaveaComment on यी नै हुन् स्कुटर दु’र्घ८टना मा परी मृ८त्यू भएकी अनमी गंगा !
चितवन, ८ चैत । चितवनस्थित शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी गंगा रानाको स्कुटर दु’र्घ८टनामा मृ८त्यु भएको छ। रानाको शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकी कार्यालय आउँदै गर्दा स्कुटर दु:र्घ८टनामा परी मृ८त्यु भएको हो। शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकीले रानाको अकल्पनीय नि८ध’नप्रती गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।
७ चैत्र, हेटौंडा । साविकको विजेता मकवानपुर–११ हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लबले शहीद स्मृति हेटौंडा गोल्डकपको उपाधि जितेको छ । शनिबार हेटौंडास्थित वन बिज्ञान खेल मैदानमा भएको फाइनलमा आर्मीले मकवानपुर–११ लाई १–० ले हरायो ।
आर्मीका लागि कप्तान टेकबहादुर बुढाथोकीले पहिलो हाफको ३८ औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो । उपाधिसँगै आर्मीले १० लाख नगद हात पारेको छ ।
उपविजेता मकवानपुर–११ ले पाँच लाखमा चित्त बुझाएको छ । प्रतियोगिताको बेष्ट फरवार्ड मकवानपुरका रञ्जन विष्ट, बेष्ट डिफेन्डर आर्मिका दिपक गुरुङ, मिडफिल्डर आर्मिका सेसेहाङ आङदेवे, गोलकिपर आर्मिका विवश चौधरी र बेष्ट प्रशिक्षक आर्मिका नवीन न्यौपाने घोषित भए । विधागत उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षकले जनही २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
मकवानपुर–११ का अमिर श्रेष्ठ प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका का छन् । उनलाई रोयल इनफिल्ड मोटरसाइकल दिइएको छ ।
नेपालका फुटबल प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले पाउने पुरस्कारमा यो नै सबभन्दा महंगो भएका आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार मोटरसाइकल मुल्य ५ लाख ५० हजार छ ।
बधाई ! सलमान खानको फिल्ममा खेल्दै सुनिल थापा
दाङमा ग्वारखोलाले बगाउँदा आमाछोराको मृत्यु